२०७७ मङ्सिर १२ शुक्रबार ०२:५०:००
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्ने नारासहित प्रदर्शन हुन थालेका छन्, अर्थ के हुन्छ ?
तैपनि व्यवस्था नै परिवर्तनको कुरा त गम्भीर विषय भएन र ?
तपाईं वेलावेला प्रधानमन्त्री गणतन्त्रप्रति इमानदार नभएको आरोप लगाउनुहुन्छ, यही समयमा व्यवस्था परिवर्तनको पक्षमा प्रदर्शन हुनुमा जिम्मेवार कसलाई ठान्नुहुन्छ ?
१० वर्षे जनयुद्ध र मधेस विद्रोह, जनजाति आन्दोलन, थारू विद्रोहलगायत आन्दोलनहरूचाहिँ मुख्य क्रान्तिकारी शक्तिहरूका थिए । तिनीहरूको नेतृत्वमा केही दशक नेपाललाई अघि बढाउन सकेको भए संविधान पनि अग्रगामी बन्थ्यो र नियम–कानुन पनि त्यही ढंगले बन्थे, कार्यान्वयन हुन्थ्यो । भूमिसुधार हुन्थ्यो, राज्यको पुनर्संरचना ठीक ढंगले हुन्थ्यो र तीव्र आर्थिक वृद्धि र समृद्धि हुन्थ्यो । त्यसो नभएको हुनाले यो भयो । र, केपी ओली सधैँ क्रान्तिकारी परिवर्तनको विरोधी मान्छे हुन् नि ! झापा आन्दोलनको ब्याज खाएर आफूलाई क्रान्तिकारी त भन्छन्, संयोगले १४ वर्ष जेल बसे, तर उनले क्रान्तिकारी बाटो त छिचोल्न छोडिसकेका थिए ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुँदा जनताका अपेक्षा धेरै थिए, तर अपेक्षाकृत रूपमा त्यो पूरा भएको देखिँदैन । आन्दोलनले व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णालाई पनि संकेत गरेको हो ? त्यस्तो हुन सक्छ ?
अर्काेतिर, क्रान्तिकारी शक्तिहरूको नेतृत्व नहुँदा राज्यको संरचना, अर्थतन्त्र, अदालत, सेना, प्रशासन, यसको अग्रगामी रूपान्तरण अथवा लोकतान्त्रीकरण हुन सकेन । तीव्र आर्थिक विकास र सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरण हुन सकेन । जनतामा जुन खालको असन्तुष्टि छ त्यो भनेको क्रान्ति पूरा नहुनुको पीडा हो । क्रान्तिको कमजोरी होइन, नेपालमा क्रान्ति पूरा नभएको र क्रान्तिपछि प्रतिगामी शक्तिहरूसँगै मिलेर यो राज्य सञ्चालन गरिनुको पीडा हामीले भोगेको हो ।